No, Greta ma aha ka gees ah | Apg29
Waxaan la email akhriste waxaa la ii soo diray inaan halkaas qoraaga yaabi karaa haddii dhaq-ka 16-sano jir ah deegaanka Greta Thunberg waa ka gees ah.
Waxaan akhriyey horaantii maanta wargeyska maalin ah in qof marka loo eego dhaqdhaqaaqa cimilada dhaqdhaqaaqa nooleynta. Laakiin dhaqdhaqaaqa nooleynta heli rajo, oo aadan helin dhaqdhaqaaqa cimilada.
Waxaan la email akhriste waxaa la ii soo diray inaan halkaas qoraaga yaabi karaa haddii dhaq-ka 16-sano jir ah deegaanka Greta Thunberg waa ka gees ah. Si aad su'aal in si deg deg ah ayaan u jawaabi kartaa:
"Maya, Greta Thunberg ma aha ka gees ah."
Greta waa qof dumar ah. Kitaabku waxa uu leeyahay in ka gees ah waa nin, sidaas wararka la isla markiiba dhaco. Ma aha waafaqsan Kitaabka Quduuska ah.
2 wadi 2: 3 . Ninnaba yuusan idinku khiyaanayn sinaba. Waayo, maalintii aan, haddii qashinka hore loo sameeyey, iyo ninka dembiga, halaag doonaa ina [ie nin], ayaa shaaca ka qaaday.
Mid ka mid ah waa in aan dhaleeceeyo
Dabcan, anigu waxaan naadinayaa ma email akhriste. Ka sokow mejlets content waa unscriptural, Waxaan jeclaan lahaa ayaa sidoo kale la lynched. Oo wax la soo dhaafay la yaab leh. Waxaa muuqata in aan la dhaleeceeyo Thunberg Greta ah.
Waxaan akhriyey in tababaraha kubada cagta kuwaas oo wax doqonimo ah iyada ku yidhi hadda is rasaas . Sure, waxay ahayd luqad aan habboonayn, laakiin inaad fahamto waxa aan ula jeedo. Markii hore, waxaan u arkay clip ka television American, waxaan aaminsanahay in ay, halkaas oo ay ku dhaleeceeyay gabar 16-sano jir ah oo la si deg deg ah u sheegay off by nin kale ereyada:
"Sidee Laabta aad dhaleeceeyo ilmaha, waxaad tahay nin u korsan ah?!"
Iyadu waa ma aha oo kaliya ilmaha, laakiin waxay sidoo kale leedahay saddex cudurka, taas oo aan hore u akhriyi on Wikipedia , laakiin hadda waxa kaliya ayaa sheegay in wixii ay lahayd oo ah "niyad-jabka daran iyo dareenka khibrad leh oo ah waxba tarayn," oo iyada 2018 go'aansaday "si ay u halkii ay dib u dhacaan murugada, geli tallaabo. "
Haddii aad dhaleeceeyo Greta lagu eedeeyay karaa of dhaleeceeyay ilmaha jirran. Sidaas ayaa joojiyay dhammaan noocyada dhaleeceyn ka dhanka dhaqdhaqaaqa agagaarka Greta Thunberg.
Dabcan, iyadu ma kuwaas oo uu ku sameeyey in ay noqdaan si fiican u yaqaan waa, laakiin waa ciidamada bokomliggande iyo danaha dhaqaale.
Anigu ma dhaleeceeyo Greta aadan, iyadu waa ilmo - iyo qof qaali ah aadanaha - kuwaas oo u baahan Ciise Masiix. Maxaa si xun ayaan u saameeyeen danaha iyo ciidamada ku lammaan. Markii ugu horeysay ee aan arkay Greta Thunberg, waxaan si dhaqso ah uga caroodeen.
Markaas Greta ma noqon si weyn oo weliba sidaas oo kale ayaan uga jawaabay. Waxaa la yaab leh in dhammaan warbaahinta dib oo u dhigma ilaa iyadii. Oo sabab in kasta oo ay fahmaan in ay jiraan wax qalloocan baannu.
Xitaa gabadhayda 13 sano jir ah, oo waa kan Greta on Instagram , maleeyey hadalka UN ahaa been abuur ah , oo iyana waxay ii sheegeen arrin lama filaan ah igu hor inta aan waqti wax sheegto.
Sidaas daraaddeed kuwa ka dambeeya Greta Thunberg ahaa smart marka ay iyada ka diray, maxaa yeelay, waxaad kaliya ma canbaareen karaa ilmaha jirran!
Oo iyana waxay ahayd on top of wax walba si aad u hesho nabadda ee Nobel Prize waa in, ugu fahmaan in ay tahay been abuur. Markii hore Madaxweyne ku xigeenka iyo dhaqdhaqaaqe cimilada Al Gore, heshay abaalmarinta ah ee documentary ah wuxuu ka sameeyey. Waxaan akhriyay in saadaasha ee uu filimka waa been oo ma iman run .
Xaaladaha sidan oo waxaad tidhaahdaan, waxa kaliya ee aad leedihiin toban sannadood, oo aan si loo badbaadiyo caalamka. Waxaa la mid ah ayaa sheegay in Greta iyo carruurta kale, iyada oo hore ayaa sheegay in wax la mid ah. Haddaba waxay ahayd abbaaraha 20 - 30 sano ka hor !
Dhulka ma hoos tegi doonaa
Earth tegi maayo in ka badan toban sano - 20 ama 30 sano. Sidaas oo dhan oo nabiyadii ah, cadaab Timid fariimaha kale waa been. First, Ciise waa soo noqon, oo wuxuu ku laaban doonaa Yeruusaalem dhulka this!
Haddii ciidda ayaa hoos baxeen, ka dibna Ciise dhulka u lahayn in uu ku soo laabto. Sidaa darteed, waxaan fahamsanahay in noocan oo kale ah waxsii Qiyaamaha waa been.
Laakiin ka dib markii Ciise ayaa dhulka waxaa boqor intii kun sannadood ah ka dib markii uu ka soo laabtay, ka dibna waxa ay noqon doontaa samo cusub iyo dhul cusub! Laakiin waxaa jiri doona baabba 'lahayn - waxa ay noqon doontaa nadiifinta dhalashadii labaad a.
Qof ayaa xitaa ku qoran magazine Church si Greta Thunberg waa nebigii . No, iyada nin nebi ah oo aan. Haddii ay weli noqon lahaa nin nebi ah - ka dibna uu yahay mid been ah. wax sii Nebi rajo xagga Ciise Masiix oo aan fariin sida Greta doontaa kuwa aan rajo iyo badbaadada sida.
Maahmaahyadii 23:18: Sida xaqiiqada ah ma waxaad sida mustaqbal, iyo rajo u noqon doonaa waxba ahayn.
Yeremyaah 29: 1: waan ogahay qorshaha baan kuu haystaa, waayo, Sayidka, waana fikirro nabadeed oo ma aha kuwa sharka ah ayaa sheegay, inuu ku siiyo mustaqbal iyo rajo ah.
Maahmaahyadii 24:14 Sidaas daraaddeed waa Oge Falsan aad naftaadana. Haddii aad ka heli, aad leedahay mustaqbal, oo aad u rajeeya ma noqon doonto waxba ahayn.
Yeremyaah 31: 1: Waxaa jira rajo mustaqbalka, ayaa Rabbigu leeyahay. Carruurtaada in ay dalkooda ka soo noqon doonaan.
Waxaan akhriyey horaantii maanta wargeyska maalin ah in qof marka loo eego dhaqdhaqaaqa cimilada la dhaqdhaqaaq nooleynta . Laakiin dhaqdhaqaaqa nooleenta Christian leedahay Ciise ee xarunta si aad u hesho rajo, oo aadan helin dhaqdhaqaaqa cimilada.
Laakiin dhaqdhaqaaqa jawiga waxa uu noqday diin. Waxaan helay video ah on YouTube xaq: " Green nooleenta | The diinta cimilada cusub ". Lars Bern Swebb television call xitaa mooshin cimilada Greta Thunberg ee ah nidaam Qiyaamaha . In wayse iskhilaafeen, waxaynu og nahay in dadka loo xidho murugaysan oo ah, laakiin in Ciise Masiix, dadka ayaa lagu wadaa free.
Haddii aan dib ugu laabto bilowga ah ee qodobkan, dabcan, ma aha Greta Thunberg ka gees ah. Waxaa, akhriska emails printer aad u badan. In email ah ayuu ka sara mariyaa sida ilaa Greta Magaca awoowe waa 666 iyo in midabka cagaaran waa sida Islaamka.
Laakiin dhanka kale dhaqdhaqaaqa deegaanka si ay qayb ka mid ah olole caalami ah oo ka gees ah waxay noqon kartaa. Waxaa jira ciidamo xoog leh ka dambeeya dhaqdhaqaaqa deegaan ee caalamiga ah in ay keeni kartaa in gees soo socda waa carshigii. dhaqdhaqaaqa Air ma aha oo gebi ahaanba aan waxba galabsan. Oo waxyaalahaas oo dhan, dadka waxay noqon kartaa mid lagu xadgudbay iyo in ay pawns kulan Isniinta ah.
Distortion of macnaha Amarka
Waxa kale oo aan ku xuso lahaa oo ku saabsan sida loo siiyo erayga macnaha a kala duwan. Mararka qaarkood waxaan ka akhrisan in Greta "shaqo joojin waxbarashada" marka waxaa jiray su'aal ah ee joojinta dugsiga. Waayo, sidee ayay ku dhufan yaabaa dugsiga dal kale, sida Mareykanka?
Ama waxa ugu yeedhaan "shaqo joojin" ama "shaqo joojinta cimilada". Ma aha su'aal ah weerarada yar, laakiin bannaanbaxyo iyo dacaayad. Waa in aad wax waayo waxa ay tahay wac. Laakiin sidaas waxay beertaan fikradaha iyo fikradaha ee maskaxda dadka si ay u saamayn jihada gaar ah.
Weydii Greta Thunberg oo ay u duceeyaan dadka kale oo dhan, kuwaas oo aan rajo lahayn. U soo ducee in wacdiyayaal iyo addoommo kale Rabbiga u soo diri doonaa iyaga si ay u maqlaan Qur'aanka ammaanta Rabbigeenna Ciise Masiix si ay isaga aqbalaan oo aanay u badbaadin!
Mat 9:38 . Sidaas daraaddeed Sayidka Rabbiga ahu wuxuu ku baryayaaye inuu shaqaalayaal diri beergooyska barya inuu shaqaalayaal.
Waxa kale oo aan akhriyey meel in wakiil Christian, waxaan aaminsanahay in ay wadaad, ayaa sheegay in arrinta ugu muhiimsan ee aan maanta heysano waa cimilada ama bay'adda. No, ma aha arrinta ugu weyn. Arrinta ugu muhiimsan waa in dadku u baahan yihiin inay aqbalaan Ciise iyo badbaadi.